Umzi mveliso weLanga leLanga-abavelisi base China belanga, abaXhasi
I-170T / 190T / 210T iPolyester yemoto iLanga
I-170T / 190T / 210T i-Polyester Car Sunshade kunye neLogo yokuprinta kwifestile yangaphambili yefestile SS-D-1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249 Ilaphu lisongelwe ngesilivere elinokubonisa ukukhanya kwelanga kunye ne-UV ukufezekisa ubushushu ukunciphisa iqondo lobushushu emotweni ukukhusela ingaphakathi lemoto ekwaluphaleni. Umsebenzi: 1. Kulula ukuncamathisela efestileni kunye neesuckers. 2. Ngaphantsi kweqondo lokushisa ngaphakathi kwaye ukhusele ingaphakathi lemoto. 3. Umbala ungenziwa ngemfuneko ngokokufuna kwabathengi ...
Ifilimu ye-Bubble PE ifilimu yelanga eneepateni ezahlukeneyo
Ukushiswa kwelanga kwimoto kwifestile engaphambili / kwiqamza elingaphambili komthunzi wefestile / kwiqamza le-Sunshade / kwi-PE bubble yokuprinta imoto emthunzini welanga
Ifilimu ye-Laser elungiselelwe umthunzi welanga i-SS-61520/24
Iphaneli yephepha le-Laser lokudibanisa iphepha + i-1.5mm i-EPE umthunzi welanga umthunzi wemoto yefestile yangaphambili / ye-laser ngaphambili kwefestile / yelanga yeLaser Item Into yeLaser yeFilimu yeMoto engaphambili yeFestile yeShishini Igama leBrand: Inani leModeli ye-OEM: SS-61520/24 Ikhadibhodi yefilimu yeLaser yekhadibhodi ene-EPE amagwebu Ubukhulu 130 * 60CM / 140 * 70cm, okanye ngokwezifiso Imibala yeSliver yemoto yelanga umthunzi Ukupakisha okwenziwe ngokwe-MOQ 1000pcs ngemoto yelanga Umsebenzi: 1. Ukukhuselwa kwe-UV ngokuchasene nelanga kunye nokukhanya kwelanga ...
Imoto yelanga enomthunzi kwicala elingasemva kunye neWindows Winds SS-M-61501/2/3
Ngentando yakho kunye ne-OEM / i-ODM yemoto yelanga emacaleni nakwifestile yangasemva
Umthunzi welanga we-EPE SS-61501/2/3/4/27
I-2mm yeSilivere ye-EPE Foam ngaphambili kwefestile enamafu enelanga enefilimu yoshicilelo lwealuminium / ifilimu emnyama ye-DU / ifilimu eluhlaza okwesibhakabhaka
I-SS-61535 enomthunzi ojikeleziswa ngumlinganiso ojikelezayo
I-fan emile njengeRhafu yokuRhola iLanga umthunzi wemoto / i-Fan-shaped / Rolling Sunshade / Retractable / Cuttable Uyilo lwefilimu ye-aluminium kunye nokusonga okumise okwe fan kungabonisa ukukhanya kwelanga ngokufanelekileyo; Yitsale xa usetyenziswa kwaye uyirhoxise xa ingasetyenziswa, ithatha kuphela umzuzwana omnye, akukho mfuneko yokuba uphinde uyidilize; Inokunqunyulwa ngokukhululekileyo ngokobungakanani kunye nokumila kwefestile yemoto yakho.
Umbrella umthunzi welanga SS-61536
Umbrella Umthunzi welanga Izinto: I-Titanium yesilivere iteyipu + yentsimbi yeambrela yethambo + yePhoto elenziweyo elenziwe ngemoto ngeLanga / ngeFan-emile / ngeTelescopic isambulela semoto elangeni / ebalekayo / esikiweyo 1. Isiphumo sokugquma ubushushu; 2. Isambrela esirhoxisiweyo, umaleko wokukhusela ilanga, akukho mfuneko yokufaka; 3. Ukuguqula iimbambo ze-concave, ukugcinwa okufanelekileyo kunye nokuhlala ixesha elide.
Imoto epholileyo yeWayini, Intente edumileyo yeMoto, 12v Isikhenkcisi seMoto esiPholileyo, IMako Car Cooler, Kupholiswa imoto epholileyo 12v, Gquma Ngaphantsi Kwemoto,